« Manonoke fanahy »: tantara holalaovin-dry Landy Volafotsy sy Lolita Monga | NewsMada
« Manonoke fanahy »: tantara holalaovin-dry Landy Volafotsy sy Lolita Monga
Hanatontosa fitetezam-paritra eto amintsika ny kaompania mpanao teatra, ny Lolita Monga, avy atsy Nosy La Réunion. Tafiditra ao anatin’izany indrindra ny seho hotanterahiny, miaraka amin’ny kaompania Landy Volafotsy…
… Etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny 15 septambra.
« Manonoke fanahy » ny lohatenin’ity piesy holalaovin’ny Lolita Monga sy ny kaompania Landy Volafotsy ity. Nalaina avy amin’ny horonantsarimiaina iray, mitondra ny lohateny hoe « Princesse Manonoke » an’i Hayao Miyazaki. Fihaonana, fifanakalozana, izany hoe, sehatra hifampitantarana sy hanehoan-kevitra amin’ny lafiny rehetra ny ambaran’ny tantara.
Ankilany koa anefa, karazana angano mikasika ny zavaboahary, izay tsinontsinoavina sy potehin-dRaolombelona, ny « Manonoke fanahy ». Mitaraina sy maneho ny hatezerany izy. Toy izany koa ireo « mahery fo » miady ho amin’ny fanajana azy. Olana iraisan’izao tontolo izao ny fahasimban’ny tontolo iainana, saingy amin’ny fomba fijery malagasy ny hanehoan’ny Landy Volafotsy sy ny kaompania Lolita Monga azy, ny 15 septambra izao.
Araka izany, azo lazaina ho fanentanana mikasika ny ady amin’ny fanapotehana ny tontolo iainana, amin’ny endriny hafa tsy toy ny mahazatra, ity piesy teatra ity.